अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता शुद्धिकरण नै हो – Janaubhar
अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता शुद्धिकरण नै हो
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस १४, २०७२ | 195 Views ||
– सुदीप गौतम
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाको स्थापना दिवस र साधारणसभा एकै दिन गर्न लाग्नुभएको छ, कस्तो छ तयारी ?
महासंघले हरेक बर्ष पुस ४ गते स्थापना दिवस मनाउँदै आइरहेको छ । एक कार्यकालमा कम्तिमा एउटा साधारणसभा गर्नुपर्ने विधानमा उल्लेख भएबमोजिम यस बर्ष हामीले साधारणसभा गर्न लागेका हौँ । दुवै कार्यक्रम एकैदिन पारेर गर्दा दुबै कार्यक्रमको गरिमा बढ्ने ठानेर पुस ४ गतेलाई छनौट गरिएको हो ।
जहाँसम्म तयारीको कुरा छ– तयारीको काम तिव्र गतिले भइरहेको छ । छनौट समितिले प्रतिभा छनौट गरेर कार्यसमितिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यसबाहेक यो बर्ष पुरस्कार संस्थापक दाताहरु र केही अग्रज पत्रकारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसैगरी यस बर्ष हामीले चौथो अंग प्रकाशन गर्दैछौँ । सचिव र कोषाध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसक्नुभएको छ । अन्य कामहरु भइरहेका छन् ।
महासंघलाई अघि बढाउन साधारणसभाबाट के–कस्ता नीति र योजनाहरु ल्याउदै हुनुहुन्छ ?
साधारणसभाबाट संस्थालाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण निर्देशन प्राप्त हुन्छ । हामीले गत डेढ बर्षको समीक्षा र बाँकी अवधिको लागि योजना बनाउने काम साधारणसभाले गर्छ । हामीले यो साधारणसभामा कार्यसमितिले तयार गरेका तालिम प्रतिष्ठान सञ्चालन निर्देशिका, पुरस्कार छनौट मापदण्ड र राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका साधारणसभामा प्रस्तुत गर्छौँ । त्यो बाहेक शुद्धिकरणको पाटो पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।
यी लगायत संस्थालाई अगाडि बढाउन सल्लाह सुझाव र कार्ययोजना साधारणसभाबाट पारित गर्ने हो । साथै हामीले यस बर्ष स्वर्गीय शान्ता पौडेल तथा स्वर्गीय गणेश केकेको स्मृतिमा सूचना केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ । यो बिषयमा पनि साधारणसभामा छलफल हुनेछ ।
भर्खरै तपाई तराइकेन्द्रित जिल्लाको राष्ट्रिय भेलामा पुगेर आउनुभयो । कस्तो पाउनुभयो तराइ–मधेसमा पत्रकारिताको अवस्था ? अनि भेलाबाट के–कस्ता कुरा पारित भए छोटकरीमा बताइदिनुस् न ।
लामो समयदेखि जारी मधेश आन्दोलन र सीमा नाकामा भइरहेको अवरोधका कारण आम नागरिकको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । देशको अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ । पत्रकारहरू असुरक्षित हुनुपरेको छ भने पत्रकारिता स्वनियन्त्रणको शिकार बनेको छ । पत्रकार र सञ्चारजगतमाथि लक्षित गरेर आक्रमण, धम्की र अवरोधका घटनाहरू भएका छन् । मिडिया उद्योग धराशायी बन्दै गएको छ । नाकाबन्दी तथा आन्दोलनका कारण मुलुकमा विद्यमान संकटका कारण मिडिया उद्योग धराशायी बन्दै गएकोमा सम्मेलनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ तर यही बहानामा कतिपय सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई निस्कासन गर्ने, करार अवधि नवीकरण नगर्ने, समयमै पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने, सुविधाहरुमा कटौती गर्नेजस्ता कार्यहरु गरेको पाइयो । त्यसैले मुलुकले थेग्नै नसक्ने यस्तो अवस्थाको चाँडो अन्त्यका लागि गम्भीर बन्न हामी सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण भेलाले गराएको छ ।
त्यसैगरी मुलुकको यो जटिल स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र एकताप्रति मिडिया जगत् अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने जस्तोसुकै संकटको घडीमा पनि रत्तिभर विचलित नभई पत्रकार आचारसंहिताको जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्न र स्वतन्त्र पत्रकारिताको व्यवसायिक धर्म निर्वाह गर्न सम्मेलनले सम्पूर्ण पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूलाई भेलाले अपील गरेको छ ।
पत्रकार महासंघले सदस्यता शुद्धिकरणको कुरा पनि उठाउँदै आइरहेको छ, जिल्लामा शुद्धिकरणका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
शुद्धिकरण हाम्रो प्राथमिकता हो । तर हाम्रो चाहना कोही पनि साधारण सदस्य निस्क्रीय नहोऊन्, अझ बढी सक्रिय होउन भन्ने नै हो । त्यसको लागि महासंघले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ । तर कोही नफर्किने गरेर पेशा परिवर्तन गरेको छ भने उहाँले महासंघको सदस्यता स्वेच्छिक रुपमा त्याग्नु नै उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यही प्रसंगमा पत्रकारितामा फर्कन नसक्ने सदस्यहरुलाई स्वेच्छिक रुपमा सदस्यता त्याग्नका लागि आह्वान गरिरहेका छौँ । जिल्लाका सञ्चार संगठनका प्रमुखहरुलाई पनि बैठकमा बोलाएर निश्चित मापदण्ड तयार गर्न आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरुको सल्लाह सुझावको आधारमा साधारणसभामा केही नीति बनाइनेछ । केन्द्रले पनि शुद्धिकरणका लागि उचित कदम चाल्न अधिकारसहित जिल्लालाई परिपत्र गरेकोले हामीलाई यो बिषयमा निर्णयमा पुग्न अझ सजिलो हुने ठानेका छौँ ।
जिल्लामा पत्रकारहरुको भौतिक र व्यवसायिक सुरक्षाको स्थिति यहाँले कस्तो पाउनुभएको छ ? साथै न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए÷नभएकोबारे अवस्था के छ ?
जिल्लामा पत्रकारहरुमाथि भौतिक आक्रमणका घटनाहरु यो बर्ष भएका छैनन् । तर हामीमाथिको असुरक्षा सदा कायम रहन्छ । तसर्थ सबै साथीहरुलाई सदैव मेरो आग्रह रहन्छ– पहिले आफ्नो सुरक्षा अनि मात्र पत्रकारिता । यो त्रासले भनेको होइन । पत्रकारितामा एउटा सिद्धान्त छ । तिमी बाँच्यौ भने मात्र पत्रकारिता गर्न सक्छौ, यही सिद्धान्तलाई टेकेर सुरक्षाका लागि पत्रकारहरुसँग हामी हरदम छलफल गरिरहेका हुन्छौँ ।
जहाँसम्म पेशागत सुरक्षाको कुरा छ, जिल्लामा यो भन्दा पहिले नियुक्ति–पत्रका कुराहरु विरलै पाइन्थे । यसपटक जिल्लामा सूचना विभागको प्रेस प्रमाण पत्र बनाउने बहानामा एक सय २५ बढी पत्रकारहरुलाई नियुक्ति पत्र प्राप्त भएको छ । बहाना जेसुकै भए पनि यो नियुक्ति पत्र प्राप्ति हाम्रो पेशागत सुरक्षाको गतिलो आधार बनेको छ । एक सय २५ मध्ये करिब १५ जनालाई मात्र स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गर्न सकियो । यसैलाई पनि हामीले पहिलोपटक भएकाले उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ । त्यसबाहेक श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक देऊ र पारिश्रमिक समयमै देऊ भन्ने हाम्रो माग सञ्चारमाध्यमसँग यथावत छ । जहाँसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त नभएको उजुरी महासंघमा परेको छैन । तर, अनौपचारिक छलफलमा कतिपय सञ्चार माध्यममा न्यूनतम पारिश्रमिकको समस्या रहेको बुझिएको छ । हामी लगत्तै सबै सञ्चार माध्यमहरुसँग यस बिषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।
तपाइँको कार्यकालको दुई बर्ष बित्दैछ यो बीचमा महासंघले उल्लेख गर्नलायक के–के काम ग¥यो नि ?
हामीले महासंघ सम्हाल्दा मुख्य तीन कुरालाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’को रुपमा मैले सार्वजनिक गरेको थिएँ । पहिलो तालिम प्रतिष्ठान गठन थियो । दोस्रो शाखाबाट प्रदान गरिने पुरस्कारको मापदण्ड निर्धारण गर्नु थियो । र तेस्रो शुद्धिकरणको कुरा थियो । दुइवटा कुरा हामीले पूरा गरिसकेका छौँ । जहाँसम्म शुद्धिकरणको कुरा छ । यो साधारणसभाबाट म्यान्डेट लिएर हामीले त्यो पनि पूरा गर्नेछौँ ।
यसबाहेक हामीले जिल्लामा रहेका सञ्चारकर्मीलाई जिल्लामै सूचना विभागको प्रेसपास उपलब्ध गराउन सक्यौँ । त्यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएका छौँ । अझ दाङ शाखाको सिफारिसमा शाखाका संस्थापक अध्यक्ष नारायण शर्मा (गुरु)ले देशभर पहिलो सम्मानार्थ पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ । त्यसलाई हामीले गौरवको रुपमा लिएका छौँ ।
जिल्लामा अप्ठ्यारोमा परेका पत्रकारहरुका लागि सहयोग गर्न छुट्टै राहतकोष निर्माण भएको छ । यो कोष कार्यसमिति बाहेकको छुट्टै समिति निर्माण गरि त्यसैको सिफारिसको आधारमा वितरण गर्ने निर्देशिका बनाइएको छ । हाम्रो कार्यकालमा दुर्घटनामा परेका तीनजना पत्रकार, बाढीपीडित एक जना र अग्निपीडित एक जना पत्रकारलाई सहयोग गरिएको छ । कार्यालयमा सोलार जडान गरिएको छ । दलित, जनजाति, महिला र बाल पत्रकारिता तालिम सञ्चालन भएका छन् । जिल्लामा ‘टट’ सञ्चालन गर्न तालिम प्रतिष्ठानका लागि करिब एक लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सञ्चार डायरी प्रकाशित गरिएको छ भने चौथो अंग प्रकाशित हुँदैछ । यसबाहेक कार्यालयको दक्षिणतर्फ हुलाक कार्यालयसँग जग्गा छुट्याई पर्खाल निर्माणमा सहजीकरण गर्ने कार्य भएको छ । यिनै कुराहरुलाई हामीले महत्वपूर्ण कामको रुपमा उल्लेख गर्न चाहन्छौँ ।
अबको बाँकी कार्यकालका लागि तपाईले के कस्ता कामहरु गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सदस्यता शुद्धिकरण नै हो । यसबाहेक हामीले गठित तालिम प्रतिष्ठानलाई पर्याप्त काम दिन सकेका छैनौं । सबै तालिमहरु प्रतिष्ठानमार्फत् सञ्चालन गरिनेछ । सुचना विभागको प्रेसपास बनाउन केही साथीहरु छुट्नुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि महासंघबाट सहजीकरण गरि जिल्लामै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रयास रहनेछ । यस बर्ष हामीले भौतिक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौँ । सूचना केन्द्रका दुइवटा कोठाहरु निर्माण हुँदैछन् । आँगनमा फूल बगैंचा निर्माण हुँदैछ । दाताहरुले आश्वासन दिएको आधारमा अरु केही निर्माण कार्य गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा छौँ । बाँकी नियमित गर्नुपर्ने काम छँदैछन् ।
देशमा जारी भारतीय नाकाबन्दी र देशभित्रकै कालोबजारी एवम् असहज स्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? नाकाबन्दीपछि सञ्चार जगतले भोग्नुपरेका पीडा न्यूनीकरणका लागि महासंघले के गर्न सक्छ ?
विभिन्न खालका समस्यामा पिल्सिदै आएका मिडियाहरू अहिले असुरक्षा र अभावको थप पीडामा छन् । कच्चा पदार्थ, सञ्चालन सामग्रीको अभाव र विज्ञापनको न्यूनताले तराई मधेशका मिडियाको प्रकाशन प्रसारणमा गम्भीर असर परिरहेको छ । मुलुकमा विद्यमान संकटका कारण मिडिया उद्योग धराशायी बन्दै गैरहेको छ । तराई मधेशमा जारी आन्दोलनको संवेदनशीलता बुझ्न सो क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन र प्रत्यक्ष संवाद जरूरी महसुस गरी तराई मधेश क्षेत्रमा स्थलगत भ्रमण, रिपोर्टिङ र प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नु सान्दर्भिक हुने भन्दै तराइ मधेश सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यसमिति, वरिष्ठ पत्रकार तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई तराई मधेशमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि हार्दिक आग्रह गरेको छ । यसले केही सकारात्मक निकास निस्कनेमा हामी आशावादी छौं ।
दाङमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरुको अवस्था के कस्तो पाउनुभएको छ ?
दाङमा सञ्चार माध्यमको बिकास उत्साहका साथ भइरहेको छ । तर सञ्चालनमा सहजता आउन सकेको छैन । बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट सञ्चार माध्यमहरु चलेको हामीले महसुस गरेका छौँ । जिल्लामा औद्योगिक बिकास भैरहेको छ । तर, यहाँ खुलेका उद्योगहरुले स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुलाई प्राथमिकतामा नराख्दा र यहाँका उद्योगहरुको विज्ञापन पनि काठमाडौँ पुगेर फेरि यहाँ फर्किदा सस्तोमा विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामी त्यसलाई तोड्न चाहन्छौँ । जिल्लाका उद्योगहरुले जिल्लाका सञ्चार माध्यमहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । र जिल्लाका सञ्चार माध्यमको बिकासमा उनीहरुको पनि योगदान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीले यस बिषयमा केही उद्योगहरुसँग छलफलसमेत गरेका छौँ । त्यसैगरि सरकारी कार्यालयहरुलाई पनि स्थानीय सुचना स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत् सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेका छौँ ।
साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामा महासंघका गतिविधिहरुलाई पाठकसमक्ष पु¥याउने मौका दिनुभयो, यहाँको पत्रिकाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामनाका साथ यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद ।
Prevयुद्ध साहित्यमा रोल्पा र आगामी चुनौतीबारे
Nextविद्यालय सुधार कार्यक्रममा ९ करोड बृद्धि